FAQs - ज़ियामेन जिन Weitai रबर र प्लास्टिक कं, लिमिटेड
कम्पनी - सामान्य
उद्धरण र ईन्जिनियरि्
यदि म एक डिजाइन समस्या गरिरहेको छु, JWT रबर मेरो लागी के गर्न सक्छ?
हाम्रो जानकार बिक्री वा ईन्जिनियरि department् विभाग कल गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। यदि तपाइँ हाम्रा ईन्जिनियरहरु बाट डिजाइन सहायता को जरूरत छ, बस हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
म एउटा नयाँ प्रोजेक्ट मा काम गर्दैछु। के म JWT बाट नमूना प्राप्त गर्न सक्छु?
हो, हामी प्रोटोटाइप र सानो रन को लागी एक लागत प्रभावी कार्यक्रम छ। कृपया हाम्रो बिक्री संग कुरा गर्नुहोस्।
JWT रबर को न्यूनतम आदेश आवश्यकताहरु के हो?
हामी भाग को निर्माण गर्न को लागी, MOQ विभिन्न उत्पादनहरु मा निर्भर गर्दछ।
के म तपाइँको सुविधाहरु हेर्न आउन सक्छु?
हो, कृपया हामीलाई भेट्न वा हामीलाई अडिट गर्न को लागी एक नियुक्ति सेट अप गर्न को लागी कल गर्नुहोस्। जब तपाइँ यहाँ हुनुहुन्छ, हामी तपाइँलाई हाम्रो देखाउन खुसी हुनेछौं
उत्पादन सुविधा र हाम्रो गुणस्तर नियन्त्रण विभाग।
तपाइँ कहाँ स्थित हुनुहुन्छ?
हामी#39, Lianmei दोस्रो रोड, लोटस टाउन, टोंग 'एक जिला, ज़ियामेन शहर, फुजियान प्रान्त, चीन मा स्थित छ।
म कसरी तपाइँ संग सम्पर्क मा रहन सक्छु?
कृपया हाम्रो अनलाइन सम्पर्क फारम मा एक सामान्य सोधपुछ सबमिट गर्नुहोस् वा हामीलाई +86 18046216971 मा कल गर्नुहोस्
यदि तपाइँसँग अतिरिक्त प्रश्नहरु छन् भने कृपया विशेषज्ञहरुलाई सोध्नुहोस्। हामी २४ घण्टा भित्र हाम्रा सबै अनलाइन अनुरोधहरुको जवाफ दिन्छौं।
के तपाइँ कर्मचारीहरु मा ईन्जिनियरहरु छन्?
हो। र हाम्रो ईन्जिनियर रबर निर्माण संग प्रचुर मात्रा मा अनुभव छ। साथै, हाम्रा सबै कर्मचारीहरु लाई उपयुक्त ज्ञान र प्रशिक्षण छ तपाइँलाई तपाइँको आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी सही रबर सामाग्री को चयन मा सहायता गर्न को लागी।
कति लामो समय देखि तपाइँ व्यापार मा हुनुहुन्छ?
JWT 2010 मा स्थापित भएको थियो।
तपाइँको कम्पनी कती ठुलो छ?
JWT पुरा तरिकाले १० मिलियन (RMB) को लगानी गरीएको छ, र plant५०० वर्ग मीटर को संयंत्र क्षेत्र छ, २०8 कर्मचारीहरु, अझै पनी चलिरहेको छ।
तपाइँको न्यूनतम आदेश के हो?
सबै उत्पादनहरु कस्टम बनेको हुनाले, न्यूनतम आदेश मात्रा उत्पादन वा शिल्प workble छ भने तपाइँको आवश्यकताहरु अनुसार जहाँ सम्म सम्भव भएसम्म निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ।
के तपाइँ सामग्री आपूर्ति गर्नुहुन्छ?
हामी एक सामग्री आपूर्तिकर्ता होइनौं, जे होस्, हामी तपाइँ तपाइँको उत्पादनहरु को लागी सबैभन्दा उपयुक्त सामग्री छनौट गर्न को लागी मद्दत गर्न सक्षम हुन सक्छौं।
म कसरी एक उद्धरण प्राप्त गर्ने?
तपाइँको सोधपुछ र चित्र को लागी पठाउनुहोस् tech-info@jwtrubber.com, oem-team@jwtrubber.com वा भ्रमण गर्नुहोस् अनुरोध उद्धरण खण्ड हाम्रो वेबसाइट को।
रबर भागहरु को प्रकार के तपाइँ आपूर्ति (जस्तै extruded, मोल्ड, आदि)?
हामी आपूर्ति गर्छौं कस्टम मोल्डेड, निकालीएको, कटौती र खराद कट रबर भागहरु, साथै प्लास्टिक इन्जेक्शन।
JWT को लागी उपलब्ध सामग्री को बिभिन्न प्रकार के हो?
हामी सहित विभिन्न सामग्री को एक संख्या संग काम गर्दछौं EPDM, neoprene, सिलिकॉन, नाइट्राइल, butyl, एसबीआर, isoprene (सिंथेटिक प्राकृतिक रबर), Viton®, कठोर र flexbile पीवीसी, र विभिन्न प्रकारका स्पंज रबर.
कुन जानकारी तपाइँ सबैभन्दा सटीक उद्धरण सम्भव प्राप्त गर्न को लागी आवश्यक छ?
सबैभन्दा सटीक उद्धरण प्राप्त गर्न को लागी, तपाइँ प्रदान गर्न को लागी आवश्यक छ: मात्रा, सामग्री चश्मा, र एक चित्र वा रबर भाग को विवरण।
एक उद्धरण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया के हो?
कृपया एक प्रिन्ट वा समीक्षा को लागी तपाइँको भाग को एक नमूना प्रदान गर्नुहोस्। आदेश टूलिंग डिजाइन मा सहयोग गर्न को लागी, कृपया तपाइँको अनुमानित मात्रा आवश्यकताहरु लाई शामिल गर्नुहोस्। कृपया सामग्री संकेत गर्नुहोस्, यदि सामग्री अनिर्दिष्ट वा अज्ञात छ, कृपया वातावरण को वर्णन गर्नुहोस् जसमा यो प्रयोग गरिनेछ।
JWT मेरो कस्टम रबर भाग को डिजाइन संग सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
JWT प्रारम्भिक डिजाइन चरण मा भाग को तपाइँको अन्तिम अनुमोदन को माध्यम बाट सबै तरीका बाट सहयोग गर्न सक्छ।
के हुन्छ यदि मलाई थाहा छैन जो बहुलक वा durometer सबै भन्दा राम्रो मेरो आवेदन को लागी उपयुक्त छ?
हाम्रो अनुभव कस्टम रबर मोल्डिंग विशेषज्ञ तपाइँ तपाइँको आवेदन को लागी साथै तपाइँको durometer आवश्यकताहरु को लागी उचित बहुलक निर्धारण गर्न मा मद्दत गर्दछ।
नेतृत्व समय के हो जब म एक अर्डर राख्छु कि एक उपकरण को आवश्यकता छ?
प्रोटोटाइप उपकरण को लागी औसत नेतृत्व समय 2-4 हप्ता छ। उत्पादन सम्पीडन टूली को लागी, नेतृत्व समय 4-6 हप्ता छ। औसत उत्पादन रबर इंजेक्शन मोल्डिंग टूली44-6 हप्ता छ। JWT बुझ्दछ कि त्यहाँ उदाहरणहरु हुन सक्छ कि सुधारिएको टूलींग लीड-टाइम को आवश्यकता पर्दछ र हामी हाम्रो टूलींग पसल संग ग्राहक को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी काम गर्दछौं।
के मेरो उपकरण चीन मा निर्मित छ?
JWT चीन मा टूलिंग को १००% कि छिटो नेतृत्व समय र ग्राहक डिजाइन परिवर्तन को लागी छिटो प्रतिक्रिया को लागी अनुमति दिन्छ।
JWT को स्पार्ट नेतृत्व समय के हो?
आदेश को प्राप्ति बाट, आदेश मात्रा मा निर्भर गर्दछ, धेरै भागहरु 3-4 हप्ता मा तपाइँको आदेश आवश्यकताहरु को अनुसार पठाइन्छ।
एक पटक म रबर मोल्डिंग टूली for्ग को लागी तिर्छु, जो टूलीs को मालिक हो?
उपकरण हाम्रो ग्राहक को डिजाइन को लागी अनुकूल छ र यसैले सम्पत्ति हाम्रा ग्राहकहरु को एक पटक भुक्तानी प्राप्त भयो।
रबर को लागी धातु सम्बन्ध अनुप्रयोगहरु को लागी JWT स्रोत मेरो धातु घटक गर्न सक्नुहुन्छ?
JWT धेरै आपूर्ति श्रृंखला संग काम गर्दछ आवश्यक धातु मुद्रांकन स्रोत को रूप मा वा हामी सकेसम्म छिटो सम्मिलित गर्न को लागी।
JWT मेरो अनुकूलन रंग आवश्यकताहरु मिलान गर्न सक्नुहुन्छ?
JWT अनुरोध गरिएको कुनै पनि रंग मेल गर्न सक्छ। हामी हाम्रो रबर आपूर्तिकर्ताहरु संग सटीक रंग मिलान प्रदान गर्न को लागी काम गर्दछौं।
के तपाइँको कम्पनी को गुणवत्ता प्रणाली आईएसओ प्रमाणित छ?
गर्व छ, हामी छौं। आईएसओ मापदण्ड को लागी हाम्रो प्रमाणीकरण २०१४ देखि प्रभाव मा रहेको छ।
के तपाइँसँग रबर-टू-मेटल बन्धन गर्ने क्षमता छ?
हो। कस्टम रबर -बाट -धातु बन्धन भागहरु को आकार हामी वर्तमान मा सानो बाट दायरा आपूर्ति - व्यास मा १ इन्च भन्दा कम - धेरै ठूलो - १ फिट भन्दा बढी समग्र लम्बाई।
नमूना र औजार को लागी नेतृत्व समय के हो?
औजार र नमूनाहरु को लागी नेतृत्व समय सामान्यतया4देखि6हप्ता को एक extruded नमूना को लागी र6देखि 8 हप्ता को एक ढाँचा र नमूनाहरु को लागी हो।
सबैभन्दा ठूलो भाग तौल र आकार तपाइँ सिलिकन इंजेक्शन द्वारा के गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी 500T मिसिन यदि हाम्रो कारखाना छ। सिलिकन उत्पादनहरु को हामी निर्माण गर्न सक्छौं को सबैभन्दा ठूलो भाग वजन 1.6kg हो, सबैभन्दा ठूलो आकार 60mm छ।
के तपाइँ मेरो आवेदन को लागी उपयुक्त बहुलक र durometer निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, विशेषज्ञहरु को हाम्रो अनुभवी टीम आवेदन र वातावरण को लागी तपाइँको भाग को लागी उजागर हुनेछ रबर वा बहुलक को उपयुक्त प्रकार को निर्धारण मा मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
म टूली purchase्ग किन्न चाहन्न, म कसरी भागहरु प्राप्त गर्न सक्छु?
धेरै भागहरु नयाँ उपकरण को आवश्यकता को लागी जाँदैछन्। हामी केहि रबर भागहरु हो कि अधिक सामान्य छन् र टूलींग पहिले नै उपलब्ध छ हुन सक्छ। तपाइँ यस प्रक्रिया को माध्यम बाट तपाइँलाई मद्दत गर्न को लागी हाम्रो स्टाफ संग कुरा गर्न को लागी हुनेछ।
कस्तो प्रकारको सहनशीलता तपाइँ तपाइँको extruded रबर भागहरु मा समात्न सक्नुहुन्छ?
हाम्रो extruded रबर भागहरु को tolerances विशिष्ट आवेदन मा निर्भर गर्दछ। हामी उपयुक्त सहिष्णुता उद्धरण एक पटक आवेदन निर्धारित छ।
कस्तो प्रकारको सहनशीलता तपाइँ तपाइँको मर कट रबर भागहरु मा समात्न सक्नुहुन्छ?
आवेदन मा निर्भर गर्दछ हामी तपाइँको मर कट रबर भाग को लागी उपयुक्त सहिष्णुता उद्धृत गर्न सक्छौं।
सबैभन्दा कम durometer के तपाइँ प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ?
Durometer सीमा रबर भाग को प्रकार हो कि तपाइँलाई आवश्यक छ मा निर्भर गर्दछ:
Extruded भागहरु - 40 durometer
ढालना भागहरु - 30 durometer
उच्चतम durometer के तपाइँ प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ?
Extruded भागहरु - 80 durometer
ढाला भागहरु - 90 durometer
हाम्रो कम्पनी को बारे मा अधिक जान्नुहोस्
निष्क्रिय रेडिएटर, सानो एल्युमिनियम एलईडी रेडिएटर, रेडिएटर रबर माउन्ट, निष्क्रिय बास रेडिएटर, रेडिएटर रबर आइसोलेटर्स, बास रेडिएटर,